Zonke iindaba ze-beta yesithathu ye-Android Q | I-Androidsis
I-beta yesithathu ye-Android Q isemthethweni: Zonke iindaba zayo
UEder Ferreño | | Iinguqulelo ze-Android
Enye yeenoveli ezintle ezilindelweyo kuGoogle I / O 2019 yayiyi-beta entsha ye-Android Q. Esi sisithathu se-betas, Kwesithandathu eziza kuba nazo inkqubo yokusebenza. I-beta entsha ethiwe thaca ngokusemthethweni kwaye isishiya nothotho lweendaba ezibalulekileyo. Imisebenzi emitsha, eminye yayo esele ikho Bekukho amarhe kwezi veki zidlulileyo kwaye ekugqibeleni zizalisekile.
I-beta yesithathu ye-Android Q ikwayiyo eza kuphehlelelwa kwiifowuni ezininzi. Kuba iya kufikelela kwizixhobo ezingama-21 zizonke. Inkqubela phambili ebalulekileyo kuGoogle kule ndawo. Ukuqaliswa kulindeleke ukuba kwenzeke kwiiyure ezingama-24, kodwa malunga noku kunye neendaba zayo siza kukuxelela yonke into engezantsi.
1 Imo emnyama
2 Izikrini ezisongelayo
3 Indlela yokugxila
4 Imibhalo engezantsi ezenzekelayo
5 Iimpendulo ezizenzekelayo
6 Izimbo zomzimba ezintsha
7 Uhlaziyo ngaphandle kokuqalisa kwakhona
8 Iifowuni eziza kuhlaziya
Siqala ngento enokuba yeyona nto ilindelweyo uninzi lwayo. Ekugqibeleni iqinisekisiwe, Imowudi emnyama iya kwenza ukungena kwayo ngokusemthethweni kwi-Android Q. Sele sibonile ukuba ezinye iindlela zokwenza ngokwezifiso zaziswa njani, kodwa ngoku kuza kuzo zonke iifowuni ezihlaziya kolu hlobo lwenkqubo yokusebenza. Ngale ndlela, ujongano lwefowuni lujika lube mnyama mnyama.
Kule meko, kuye kwaqinisekiswa ukuba iyakwenziwa isebenze ngokuzenzekelayo Okwangoku sisebenzisa imo yokonga umbane kumnxaba. Kule beta ungazama ngoku.
Imowudi emnyama kwi-Android: Imvelaphi kunye nezibonelelo
Iifowuni zokuqala ezisongelayo zilungiselela ukwenza ukungena kwazo kwintengiso kungekudala. Ukusukela ekuqaleni, uGoogle sele ebonakalisile ukuzibophelela kolu hlobo lwesixhobo, esebenza ngeSamsung nkqu nakwizinto zokusebenza. Ngoku, ifuna ukunika inkxaso kwi-Android Q ngokusemthethweni. Kuba inkxaso kunye nemowudi yokusebenza elungiselelwe yaziswa kolu hlobo lwezikrini.
Ngale ndlela, kuyenzeka ukuba usebenzise usetyenziso olunesiqingatha sekhusi, kwaye xa isikrini sandisiwe ngokupheleleyo, insiza nayo iya kwenza njalo. Okanye ukwazi ukusebenzisa izicelo ezininzi ngaxeshanye, yahlulwe phakathi kwezi zikrini.
Lo ngumsebenzi oza kunika abasebenzisi ithuba lokuba khetha ukuthulisa izaziso ezithile ixesha elithile. Kule meko, kukho ukubakho kokumisela ukuba zeziphi izicelo esifuna ukuzifumana kwaye zeziphi esingazifumaniyo. Ndiyakhumbula ukungaphazamisi imowudi kwi-Android, nangona kule meko kuza nolunye uphuculo. Ukongeza, abasebenzisi banokuseta ixesha abafuna ukuba le Modi yokuGxila ukuba isebenze nangaliphi na ixesha. Ke iyaqwalaseleka ngakumbi.
Imibhalo engezantsi ezenzekelayo
Inqaku lomdla omkhulu oza kuphehlelelwa nge-Android Q. Imalunga nokubanakho kwe yenza iincwadana ezizenzekelayo kuyo nayiphi na ividiyo ebonisiweyo kwifowuni yethu. Nokuba ividiyo esiyibukeleyo kwiwebhu, enje ngevidiyo. Ngokomgaqo iphehlelelwa njengomsebenzi wabantu abakhubazekileyo. Kodwa ikwaboniswa njengokhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukubukela ividiyo ngaphandle kwefowuni ekhupha isandi.
I-Gmail yazisa ngokusesikweni abaphenduli abazenzekelayo kudala. Kuxhomekeka kumxholo we-imeyile, uthotho lweempendulo ezinokuthi zithunyelwe. Inqaku eluncedo kakhulu, ngoku elithatha umlinganiso omtsha kule beta ye-Android Q. Njengoko isiya kwizaziso. Ke ukuba sifumana umyalezo ovela kwiapp, singasebenzisa impendulo ezenzekelayo ukuthumela ngelo xesha.
Izimbo zomzimba ezintsha
Izimbo zomzimba zihlaziyiwe kule beta intsha ye-Android Q. UGoogle utshintshe izijekulo kwinkqubo yokusebenza ixesha elide. Kule meko, sifumana inkqubo efana naleyo ikwiiPixels, ukuze kungabikho iqhosha lokubuya, kodwa endaweni yoko kuya kufuneka kusetyenziswe isenzo esithile.
Uhlaziyo ngaphandle kokuqalisa kwakhona
Okokugqibela, sifumana ithuba lokufaka uhlaziyo oluncinci kwifowuni, ngaphandle kokuhlaziya ifowuni kamva emva kokuyifumana. Nangona kule meko, yinto ethi iya kukhutshwa kuphela ngeefowuni ezine-Android Q ngokwendalo. Ke kude kube ngunyaka olandelayo ayizukuqheleka.
Iifowuni eziza kuhlaziya
Njengoko besesitshilo, zingama-21 iyonke iminxeba eya kuba nokufikelela kuhlaziywa kwale beta yesithathu. Imele ukwanda okubonakalayo xa kuthelekiswa neminye iminyaka. Kulindeleke ukuba le beta izakwaziswa kwiiyure ezingama-24 ezizayo, nge-OTA, kwezi fowuni. Uluhlu lulandelayo:
I-Google Pixel / XL, iPixel 2/2 XL, iPixel 3 / 3XL, iPixel 3A / 3A XL
IVivo X27, Vivo Nex S kunye neNex A.
Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Hlanganisa 3 5G
I-Huawei Mate 20 Pro
Ukuba unayo nayiphi na le modeli, awuzukulinda ixesha elide ukuze uhlaziye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » I-beta yesithathu ye-Android Q isemthethweni: Zonke iindaba zayo
Umbala weblast Blast yi "Pang" enemibala emininzi kunye namanani
I-Google Pixel 3a kunye nePixel 3a XL: Ukungena kukaGoogle kuluhlu oluphakathi